Apple dia mety hahagaga antsika amin'ny headset Bluetooth an'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ity vaovao ity dia tsy miorina amin'ny tsaho avy amin'ny loharano akaiky an'i Apple, saingy tsy hevitra lavitra izany Apple dia manana headset Bluetooth vononanatao manokana ho an'ny Apple Watch. Fa maninona no afaka manao zavatra toy izany? Betsaka ny hevitra manohana an'io hevitra io na dia misy ihany aza ny sasany manohitra an'io. Andininy etsy ambany.
Apple dia orinasa foana izay mozika no iray amin'ireo mampiavaka azy. Noho io antony io dia nampiditra finday an-telefaona tamina iPods sy iPhones foana izy ireo. Izy aza dia manana ny headphones azy manokana izay azo vidiana misaraka. Raha ampiantsika amin'izany fa afaka mitendry mozika ny Apple Watch nefa tsy mila iPhone ary mila headphone bluetooth ho an'ity izy, maninona no tsy dia hafahafa loatra ny fisian'ny kabary Bluetooth miaraka amin'ny fanombohan'ny Apple Watch?
Ny fividianana Beats an'i Apple dia tsy misy ampahany amin'ny mozika ao amin'ilay orinasa ihany, fa koa ny headphones malaza amin'ny marika iray ihany. Apple dia afaka nampiasa tsara ny iray amin'ireo headphone efa ananan'i Beats eny an-tsena, ampio ny paoma, ovay ny loko ary apetraho eo amin'ny stand eo akaikin'ny Apple Watch. KOA azonao atao ny manamboatra ny headphones anao amin'ny alàlan'ny teknolojia Beats ary manomboka marketing azy ireo manararaotra ny fandefasana ny Apple Watch.
Tsy hevitra tsy dia mahazatra izy io, fa mety ho tetika diso ho an'ny orinasa ihany koa. Toa ny hevitr'i Apple dia ny mitazona ny marika Beats. Manana ny lojikany satria ny marika dia manana izay rehetra hangatahinao: laza mihoatra ny ampy, ny mombamomba azy ary mitovy dika amin'ny kalitao sy marika premium ihany koa. Fa maninona no very antoka izany?
Marika maro no nampiditra headphones Beats tao amin'ny finday avo lenta ho fitakianaSolosaina maro koa no nametraka ny sary famantarana Beats mba hanasongadinana ny rafitra audio tena tsara nampidiriny. Apple dia afaka nampiroborobo fotsiny ny headphones an'i Beats tamin'ny alàlan'ny fananganana ny Apple Watch.
Hanana headphone Bluetooth ho an'ny Apple Watch ve isika amin'ny Alatsinainy izao? misy kely ny fantatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple dia mety hahagaga antsika amin'ny headphones Bluetooth amin'ny Apple Watch
Nieritreritra foana aho fa tsy manana headset bluetooth ny paoma ary mahita fa tsy manana seranana jack ny fiambenana paoma noheveriko fa ho tonga ny fotoana. Manantena aho fa namoaka headset bluetooth tarehy sy maso izy ireo, hividy izany ho ahy aho.
damaeg dia hoy izy:
Raha ny fahitako azy dia ilay famenony tsy hita ao amin'ny ekosistra iphone + Awatch. Tamin'ny MWC2014 dia nanolotra ny Resound LINX ny orinasa Danoa iray. Earphone malina noforonina manokana ho an'ny iphone sy ios7. Ka nieritreritra aho fa hahafinaritra azy ireo ny maheno ireo hafatra, miantso voajanahary. Taty aoriana dia nanolotra combo finday + Smartwatch + headphone i Motorola izay nandalo tsy nisy fanaintainana na voninahitra. Heveriko fa nanomboka namidy tany Amazon ny volana lasa izay tany Espana.
Tsy ho zava-baovao eto ambanin'ny masoandro izany fa i Apple kosa hamidy amintsika ho zava-baovao.
Mamaly an'i damaeg
InstallReset, alamino araka ny filaharan'ny abidy ny Springboard